Sequoia 1.0, maktabad fulisa heerarka OpenPGP | Laga soo bilaabo Linux
Sequoia 1.0, maktabad fulisa heerarka OpenPGP
Ka dib saddex sano iyo badh oo horumar ah ayaa la daabacay xirmada tafatirka Sequoia 1.0, Soosaarista maktabada aaladaha amarka iyo shaqooyinka iyadoo la hirgalinayo heerka OpenPGP (the RFC-4880).
Daahfurka ku soo koobay shaqada heerka hoose ee API, kaas oo fuliya caymiska heerka OpenPGP, oo ku filan adeegsi buuxa. Lambarka mashruuca waxaa lagu qoray Rust waxaana lagu qaybiyaa liisanka GPLv2 +.
Mashruucan waxaa aasaasay saddex kaqeybqaatayaasha GnuPG ee ka socda g10code, horumariyaha ah fiilooyinka GnuPG iyo xisaabinta nidaamka 'cryptosystem'. Kooxda Sequoia waxaa sidoo kale lagu yaqaan abuurista Hagrid keyserver, oo ay adeegsadaan adeega furayaasha.openpgp.org.
Ujeedada mashruuca cusub wuxuu ahaa in dib loo naqshadeeyo dhismaha isla markaana lagu dabaqo farsamooyin cusub si kor loogu qaado amniga iyo kalsoonida loo qabo koodhka.
Si loo hagaajiyo amniga, Sequoia ma isticmaasho oo keliya qalabka wax lagu barto hubi inay isticmaalaan luqadda Miridhku, laakiin sidoo kale ilaalinta qaladka-heerka API.
Tusaale ahaan, API kuu oggolaan maayo inaad si qalad ah u dhoofiso waxyaabaha muhiimka ah ee muhiimka ahtan iyo, by default, hawlaha dhoofinta u baahan xulasho cad Sidoo kale, API waxay hubisaa in talaabooyin muhiim ah la seegin markii la cusbooneysiinayo saxiixa dijitaalka ah; Sida caadiga ah, waqtiga abuurka, helitaanka algorithm, iyo soo saaraha saxiixa si otomaatig ah ayaa loo cusbooneysiiyaa.
Sequoia waxaad kaloo iskudayeysaa inaad ka takhalusto cilladaha GnuPGsida deynchronization ka shaqeynta aaladaha taliska aaladda leh maktabada shaqada (ficilada qaar waxaa lagu sameyn karaa oo kaliya iyadoo la adeegsanayo utility) iyo isku xirnaan aad u adag oo udhaxeysa qaybaha, taas oo adkeyneysa in isbedel la sameeyo, obfuscates salka koodhka iyo ka hortagga abuurka ee nidaamka unugga oo dhammaystiran. -doodsiyo.
Sequoia wuxuu kobciyaa adeegga qadka amarka sq iyadoo la adeegsanayo qaabka amarka nidaamka 'Git style', barnaamijka sqv (bedelka gpgv) si loo xaqiijiyo saxiixyo gooni ah, utility sqop (Stateless OpenPGP CLI), iyo maktabada sequoia-openpgp.
Waxaa jira xiriiriyeyaal luqadaha C iyo Python. Hawlaha badankood ee lagu sharaxay heerka OpenPGP waxay la jaan qaadayaan sirta, goynta, abuurka iyo xaqiijinta saxeexyada dhijitaalka ah.
Waxyaabaha horumarsan, waxaa lagu xusay inay taageerto xaqiijinta iyadoo la adeegsanayo saxiixyo dhijitaal ah oo si gooni gooni ah loo bixiyay (saxiix gaar ah), la qabsiga isdhexgalka maamulayaasha xirmada (APT, RPM, upload, iwm.), Awoodda lagu xadidayo saxiixyada iyadoo la eegayo heerka iyo waqtiga.
Si loo fududeeyo horumarka, khaladka, iyo falanqaynta dhacdooyinka, aaladaha baaritaanka baakadka ayaa la bixiyaa, kuwaas oo ku milma falanqeeyaha oo kuu oggolaanaya inaad si muuqaal ah u falanqeyso qaabdhismeedka farriimaha sirta ah, saxiixyada dhijitaalka ah, iyo furayaasha.
Sababo amni awgood Adeegsiga adeegyada loo yaqaan 'cryptographic services', sida coprocessors ee go'doominta xisaabinta go'doonsan, ayaa la taageeray Go'doominta dheeraadka ah, u kala soocida habab gaar ah ee adeegyada la shaqeeya furayaasha dadweynaha iyo kuwa gaarka ah ayaa lagu dhaqmaa (isdhexgalka howlaha waxaa lagu abaabulaa iyadoo la adeegsanayo borotokoolka Cap'n). Tusaale ahaan, keystore-ka waxaa loo sameeyay qaab hanaan gooni ah.
Waxaa jira laba ikhtiyaar oo API ah: heer hoose iyo heer sare. API-ga heerka-hoose ah wuxuu u tarmaa sida ugu macquulsan awooda OpenPGP iyo kordhinta laxiriirta qaarkood, sida taageerada ECC, nootaayo (saxiixa saxiixa) iyo walxaha qabyo qoraalka daabacaadda mustaqbalka.
Waxaa la ogaaday in marka loo eego shaqooyinka qorshaysan, Sequoia waxay gaadhay u diyaar garowga nooca 1.0 sanad kahor, laakiin horumariyeyaashu waxay go'aansadeen inaysan ku degdegin oo ay waqti badan ku qaataan si loo raadiyo khaladaadka loona qoro dukumiintiyo dhameystiran oo tayo sare leh oo leh xiriiriyeyaasha macluumaadka ee heerka OpenPGP iyo tusaalooyinka isticmaalka.
Nooca 1.0 illaa hadda kaliya wuxuu daboolayaa sanduuqa sequoia-openpgp iyo koontada xaqiijinta saxeexa dhijitaalka ah ee sqv. CLI-yada "sq" iyo API-yada heerka sare wali ma xasilin waana la dhameystirayaa.
Xaddidaadaha la qorsheynayo in laga saaro sii-deynta mustaqbalka waxaa ka mid ah hirgelinta adeegyada kaydinta furayaasha gaarka ah iyo kuwa dadweynaha, taageeridda qoraallada cad ee saxeexyada dhijitaalka ah, iyo awoodda loo adeegsado muujinta joogtada ah si loo go'aamiyo saxeexyada kalsoonida leh
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Sequoia 1.0, maktabad fulisa heerarka OpenPGP